Archives fahamarinana - Fanisana ho an'ny fanjakana
Tag Archives: fahamarinana
Handeha amin'ny ho avy fanamavoana lehibe ny Masina ianao.
Pedro Regis - Hanova ny lalàna ny lehilahy
Ny fahazavan 'ny fahamarinana dia tsy hovonoina mandrakizay.
Pedro Regis - Lazao na aiza na aiza i Jesosy
Hitombo ny fitambaran'ireo fahavalo mba hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Akory ny anaran'i Jesosy!
Pedro Regis - Miaro ny fahamarinana
Ny haizina matevina dia hilatsaka ao am-piangonana.
Pedro Regis - Miaro ny rakitra lehibe
Ireo fahavalo dia hihetsika hamono ny fahazavan'ny Eokaristia.